Kuthetha ukuthini ukuphupha ufudo? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Ngaphandle kokuba sisilwanyana esingaqhelekanga, kokubini ngenkangeleko nangemikhwa, ufudo lolunye lweempawu zomonde kunye nokuphila ixesha elide, kuba ezinye iintlobo zofudo zingaphila iminyaka engamakhulu amabini!
Ngokubanzi, ukuphupha ufudo yinto enye nolonwabo olukhulu endleleni okanye umntu osondele kakhulu kuwe.
Nangona kunjalo, ukuphupha ufudo kunokuba neendlela ezininzi zokutolika. Kungenxa yoko le nto kulungile ukukhumbula ngononophelo into oyiphuphileyo:
1 Intsingiselo yokuphupha ngofudo
2 Unokuthetha ntoni ufudo ngaphakathi kumanqina akhe?
3 Kuthetha ukuthini ukuphupha ufudo olwaphukileyo?
4 Ithetha ntoni xa sibulala ufudo ephupheni?
5 Ithetha ukuthini iphupha lofudo oluhlasela thina?
Intsingiselo yokuphupha ngofudo
Ukuba ukhe waphupha ufudo luqubha okanye luhamba emhlabeni, nantoni na, lungela into enkulu eyonwabisayo! Into engalindelekanga kwaye intle kakhulu iya kwenzeka ebomini bakho kwakamsinya, nangona kunjalo yiba nomonde kwaye ungakhathazeki!
Kwakhona, yindalo, suku bonisa ukuba ubusazi into ngaphambili!
Unokuthetha ntoni ufudo ngaphakathi kumanqina akhe?
Impuphu yofudo yenye yezona zinto zithembekileyo kumakhaya ethu kwaye xa siphupha ufudo lushwabene ngaphakathi kwisigcina-ntloko oko kuthetha ukuba siba noloyiko, nokuba siyazi okanye asikho zingqondweni, kuba ukuzikhusela sifuna indawo yokusabela ikhaya lethu.
Nokuba yintoni, ungavumeli uloyiko luthathe indawo, kuba lusikhubaza kwaye ubomi bethu buphela bumi.
Kuthetha ukuthini ukuphupha ufudo olwaphukileyo?
Ukuphupha uphuphu olophukileyo kuthetha ingxaki ekhaya! Nokuba kungenxa yokungaboni ngasonye namalungu osapho ahlala endlwini okanye ngenxa yeengxaki kulwakhiwo lwendlu uqobo (ukulungiswa) okanye amaxwebhu epropathi.
Kodwa ke musa ukoyika! Nokuba ubona isigcina-ntloko esaphukileyo, ungasombulula ngexesha! Yiba nomonde wofudo.
Ithetha ntoni xa sibulala ufudo ephupheni?
Nangona kuvakala kubi, xa ubulala ufudo ephupheni, ingakholeleki njengoko inokubonakala, luphawu oluhle! Kungenxa yokuba ibonisa kuphela ukuba siya kuba nakho ukusombulula uhlobo oluthile lwengxaki okanye ingxaki ekhathaza ingqondo yethu okanye ebiqhubeka iminyaka.
Ukuba ephupheni ubulala ufudo elwandle, loo thamsanqa iya kuphindwa kabini!
Ithetha ukuthini iphupha lofudo oluhlasela thina?
Khumbula ukuba ufudo sisilwanyana esiseluxolweni nesinomonde ngaphambi kokwenza naluphi na uhlobo lokuphicothwa kwephupha apho ufudo ekuluma khona okanye akuhlasele ngandlela thile.
Ngapha koko, kukubonisa nje kwe-subconscious yakho ukugcwala imvakalelo yomoya! Thetha ngezinye iinyani komnye umntu, nokuba zivela kusapho lwethu, abahlobo bethu okanye abantu esingabaziyo esithethe nabo.